တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အခါလည် အတွေး
ဖြတ်သန်းခဲ့သော လမ်းတလျှောက် …
ကျမ ဘလော့စရေးခါစ … တက်ကြွမှုတွေ လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ တနေ့တနေ့ ဒီဘလော့လေးနဲ့ ယဉ်ပါးပျော်ရွှင်နေခဲ့မိတယ်။ ဘလော့လောကအကြောင်းလဲ သိပ်မသိ၊ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ ဆိုတာလည်း နားမလည် စာရေးချင်စိတ်တခုထဲနဲ့ ဒီလောကထဲ ယောင်လည်လည် ရောက်လာခဲ့ရတယ်။
ဘလော့စပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကတော့ တခါတုန်းကရေးခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ ဖိုရမ်တွေ မှာ ရေးရတာ လွတ်လပ်မှုမရှိတာက တကြောင်း၊ ကိုယ့်ထက်အရင် ဘလော့ ရေးသူတွေကို အားကျတာကတကြောင်း၊ စာမရေးရရင် မနေနိုင်တာက တကြောင်းတို့ကြောင့် ဘလော့လုပ်နည်းတွေဖတ်၊ ဟိုလူ ဒီလူ အကူအညီ တောင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် ဘလော့လေးတခု ဖန်တီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျမဘလော့ကို ဖတ်တဲ့သူတွေ ရှိလာတဲ့အခါမှာ …
စမ်းချောင်းလေးဘ၀ .. ပထမအရွယ် ..
သူဟာ ချောင်းငယ်လေးစီးဆင်းသလိုပါပဲ ...
ဖြည်းညင်း ညင်သာစွာ စီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။
တခါတရံ .. စီးဆင်းရင်းနဲ့ ရပ်တံ့ပြီး တနေရာထဲမှာ တ၀ဲလည်လည်ဖြစ်လိုဖြစ် ...
တခါတလေတော့လဲ .. အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်း ပျော်ရွှင်စွာ စီးဆင်း လို့ ..။
တခါတခါ .. ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ရေလေးတွေကို သယ်ဆောင်ရင်း ..
တခါတခါတော့လဲ နောက်ကျုညစ်ထေးတဲ့ ရေတွေကိုအဖော်ပြုရင်း ..
ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲတဲ့ဘ၀မှာ ..
ချောင်းငယ်ကလေးကတော့ စီးဆင်းဆဲ .. စီးဆင်းမြဲ ..ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ရပ်တံ့လိုက် စီးဆင်းလိုက်နဲ့ အချိန်တွေ ရွေ့လျားသွားသလို ကျမ ဘလော့ လေးလည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့တာ ခုဆိုရင် အခါလည် တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အခါလည်ခဲ့ပေမယ့် တစုံတရာ ရင့်ကျက်မှုတော့ မရှိသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဆို ကျမအတ္တနဲ့ မဖြစ်ညစ်ကျယ် ကျမရဲ့ ဉာဉ်ဆိုးတွေကြောင့် ဒီဘလော့လေးဟာ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်လေးတွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ သောကတွေ ဒဏ်ရာတွေ ကြောင့် အပြီးသတ် ရပ်တံ့ချင်စိတ် တခါတလေ ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ … ကျမဟာ “ဒုက္ခကို ဖက်တွယ်” ပြီး စီးဆင်းလက်စ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ရပ်တံ့လို့မရတော့ဘဲ ဆက်လက် ဆက်လက် …. ။
မြစ်တစင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှု .. ဒုတိယအရွယ်
ချစ်ခြင်း .. မုန်းခြင်း .. ကြင်နာမြတ်နိုးခြင်း အပါအ၀င် ..
တဖြည်းဖြည်း စီးဆင်းလာလိုက်တာ ..
မြစ်တစင်း ..ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရ။
ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မစီး ..
စီးဆင်း ရင်း .. စီးဆင်း လို့ .. ။
ရေတက် ရေကျ .. သဘာဝဒဏ်တွေ ..
အပြုံးနဲ့ အရှုံး ..လောကဓံတွေ ..
ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဖက်တွယ် ..
အရယ်တွေ .. အမောတွေ ..
သောကတွေ ဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ ..
စီးဆင်းရင်း ကြီးပြင်းလာခဲ့ပေါ့ ..
တနေ့မှာတော့ စီးဆင်းခြင်းတွေရဲ့ အဆုံးသတ်ကို ရောက်ရ ကြုံရဦးမှာပဲလို့ ကြိုတင် တွက်ဆထားပါတယ်။ အဲဒီလို အဆုံးသတ်တဲ့အခါ … ဘယ်လိုများ နေမလဲ …။ စီးဆင်းခြင်းတွေ အဆုံးသတ်ပေမဲ့ မာနတွေ အတ္တတွေ မကုန်နိုင် သေးသမျှတော့ လောကဓံလှိုင်းတံပိုးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလား … ။ ကျမ တွေးနေမိတယ်။ ခုနေခါမှာတော့ ပင်လယ်ထဲမျောနေတဲ့ “သစ်ဆွေးတုံးကလေး” ရဲ့ … အဆုံးသတ်ရမယ့် အချိန်ကို .... စောင့်စားနေရသလိုပါပဲ။ တခါတခါတော့လည်း အားလုံးကို အရှုံးပေးပြီး ငြိမ်ငြိမ်ကလေးသာ ကျောခိုင်း နေလိုက်ချင်ပါတော့ တယ်။
လှိုင်းတံပိုးများနဲ့ ပင်လယ် .. တတိယအရွယ်
စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစင်းရဲ့ အဆုံးသတ်ရာ ..
ပင်လယ်ပြင်မှာတော့ လှိုင်းဂယက်တွေနဲ့လေ .. ။
သာယာတဲ့အခါ ..ငြိမ်သက် ..
လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေ .. တလက်လက်နဲ့ပေါ့။
ဘ၀မုန်တိုင်းတွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါမှာတော့ ..
လှိုင်းတွေထန် .. မာန်တွေတက် ..
ကောင်းကင်က ပြာရင် ပင်လယ်ကပြာ ..
ကောင်းကင်က မှောင်ရင် ပင်လယ်က မှောင် .. နဲ့ ..
ကောင်းကင်ရဲ့ အရောင်အတိုင်း ပြောင်းလဲနေရတဲ့ ..
လဲပြိုအောင် တိုက်စားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ..
၀ပ်ဆင်းခဲ့ရတာပဲလေ .. ..။
“အကြောင်းတရား ၄-ပါး” နဲ့ ညီညွတ်မှ ဘလော့ရေးနိုင်မယ်လို့ ကျမ ရေးခဲ့ဖူး ပါတယ်။ အကြောင်းတရား ၄-ပါး ဆိုတာ အမြဲ မညီညွတ်နိုင်ဘူး။ ဒီဘလော့လေးရဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့နေ့ဆိုတာ တနေ့တော့ ကြုံလာရဦးမှာပဲ မဟုတ်လား။ အဲဒီအခါမှာတော့ … တခါတလေ မျက်စိလည် ရောက်လာမယ့် ကွန်မန့်လေးတွေကလွဲပြီး ဘာတခုမှ ရှင်သန်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကန်ရေပြင်ဘ၀ .. စတုတ္ထအရွယ်
စီးဆင်းမှုတို့ ဖြည်းညင်းစွာ ရပ်တံ့
အားမတန်ပေမဲ့ မလျှော့ခဲ့တဲ့ မာန်တွေနဲ့လဲ ကင်းကွာ ..
ကျောက်ဆောင်တွေကို ကျောခိုင်း ..
ကမ်းခြေတွေရဲ့အဝေးဆုံးကို စွန့်ခွာ ..
ကန်ရေပြင်ပမာ ..ငြိမ်သက်အေးစက် ..
အခုတော့လေ .. .. .. ။
ငြိမ်သက်နေတဲ့ ကန်ရေအိုဟာ ..
နွမ်းနယ်နေတဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေ ..
အထီးကျန်ငှက်ငယ်လေးတွေကို အဖော်ပြုရင်း ..
စွန့်လွှတ်ခြင်းတွေ .. ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ .. နစ်နာခြင်းတွေကို မေ့လျော့
ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ..
သူ့ဘ၀ အဆုံးသတ်မဲ့ နေ့ရက်တွေကို
တချိန်က သူဟာ ..
စီးဆင်းရင်း ရှင်သန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ..
ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ တွေဝေငေးမော ..
ဒီလိုပါပဲ။ သံသရာဆိုတာ “လည်ပတ်နေတဲ့အရာ” ပဲ မဟုတ်လား။ ပျော်ရွှင်ချိန်၊ ကြည်နူးချိန်ဆိုတာတွေရှိသလို ၀မ်းနည်းချိန် ဆိုတာလည်း ကြုံရဦး မှာပေါ့ … ။ လက်တွဲထားချိန်မှာ ကြည်နူးခဲ့ကြရသလို … လက်တွဲဖြုတ်ကြရချိန် မှာလည်း ၀မ်းနည်းကြရဦးမယ်။
တကယ်တော့ … ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ ဒီဘ၀ တိုတိုလေးထဲမှာ … တနှစ်တာအချိန်ကာလ ဆိုတာ ဘာမှ မပြောပ လောက်ပါဘူး။ ဒီတနှစ်တာ အတောအတွင်း ၀မ်းသာမှု၊ ၀မ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ပျက်မှု၊ မိတ်ဆွေတိုးမှု၊ မိတ်ပျက်မှု … အမှုအဖြာဖြာနဲ့ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါတွေကို လောကဓမ္မ လို့ မှတ်ယူပြီး … ရှေ့ဆက်ရမယ့် တနှစ် + ၁ အတွက် အားအင်တွေ ဖြည့်တင်းကာ ဘလော့ကလေး မရပ်မချင်း စီးဆင်းခွင့်ပေးပါလို့ … … ။
၃၀၊ သြဂုတ်၊ ၂၀၀၇
နေ့ ၁၁ နာရီ
မှတ်ချက်။ .. ။
ဒီနေ့ဟာ ကျမဘလော့ရဲ့ တနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပါ။ တနှစ်ပြည့်အဖြစ် …
ဘလော့ဘာကြောင့်ရေးသလဲ လို့ tag ထားတဲ့ ညလေး၊
အကြိုက်ဆုံး ၅ ခု ရွေးပေးဖို့ tag ထားတဲ့ ယူဆဂိနဲ့ ကိုရန်အောင် တို့အတွက် အားလုံးပေါင်းစုပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်က စာတွေဟာ အကောင်းဆုံး မဟုတ်ခဲ့သည့်တိုင် အမှတ်တရ ရေးခဲ့ဖူးတာလေးတွေမို့ စာဖတ် သူတွေ အကြိုက်နဲ့ ကိုက်ညီချင်မှ ညီပါလိမ့်မယ်။ ကျမစာများကို အစဉ်တစိုက် ဖတ်ရှုဝေဖန် ပေးကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 5:46 AM
Labels: အမှတ်တရ, အတွေး အပိုင်းအစများ
During past one year, I gotalot of knowledge from your blog.
And I can learn human beings from comments. :D
Thank you, ma may.
I will cook something this weekend for your 1st anniversary . Come and eat on my little green villa page.
မမေဘလော့ဂ် တနှစ်ပြည့်တာ ကျနော့်ထက် ၁၅ ရက်စောတယ်။ ကျနော်ကတော့ မမေ ဘလော့ဂ် မရေးခင်ကတည်းက ရေးဖူးတဲ့ `မုန်တိုင်းအလွန်´ ၀တ္ထုကို ဖတ်ပြီးကတည်းက မမေအရေးအသားကို အားပေးနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်ရတော့လဲ `မြက်တောထဲမှာ´ ပို့စ်ကနေ အခုနောက်ဆုံး `အခါလည် အတွေး´ ဆိုတဲ့ ပို့စ်အထိ ပို့စ်အားလုံး တခုမကျန် ဖတ်ခဲ့၊ နည်းနာယူခဲ့၊ မှတ်သားခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့ဂ် တနှစ်ပြည့်ကနေ နောင် ကာလပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်၊ ခံစားထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ၊ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
8/30/2007 12:43 PM
အခါတွေ အခါခါလည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်
8/30/2007 3:39 PM